Doka misy karama sy fampisehoana | Martech Zone
Vokatra, serivisy ary vaovao momba ny doka sy karama ary dokam-barotra ho an'ny mpivarotra ao Martech Zone
Alarobia, Septambra 22, 2021 Alarobia, Septambra 22, 2021 Angelina Lugova
Ny fipoahana ny safidin'ny media streaming, ny atiny ary ny fahitana tamin'ny taona lasa dia nahatonga ny fanaovana dokambarotra Over-The-Top (OTT) tsy ho raharahiana ireo marika sy ireo maso ivoho misolo tena azy ireo. Inona no atao hoe OTT? OTT dia manondro serivisy fampitam-baovao mivantana izay manome atiny fampielezana nentim-paharazana amin'ny fotoana tena izy na amin'ny fangatahana amin'ny Internet. Ny teny hoe ambonimbony dia midika fa ny mpamatsy atiny dia mitaky ny tampon'ny serivisy amin'ny Internet mahazatra toy ny fitetezana tranonkala, mailaka, sns.
Ny iray amin'ireo mpanjifako dia mandeha eny an-dàlana hanao fampisehoana varotra ary nangataka ahy tolo-kevitra ho an'ny sticker sticker ho an'ny solosainy ary ho fialan-tsininy amin'ireo mpanjifany sy mpanjifany. Ho marin-toetra aho fa nanafatra sticker tamin'ny Internet ary ny sticker tokana avo lenta izay azoko tamin'ny vidiny lafo ary ny fiovana lehibe dia ny Sticker Mule. Ny lakilen'ny safidiko dia sticker iray izay miala mora foana